मोफसलमा किन बढेन शेयर बजारमा अाकर्षण ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
मोफसलमा किन बढेन शेयर बजारमा अाकर्षण ?
३० भाद्र २०७४, शुक्रबार १७:४२
बनेपा । शेयर बजारमा आर्कषण बढ्दै जाँदा नयाँ/नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएको बनेपाका ब्रोकर कार्यालयमा शेयर कारोबारको रकम कम देखिएको छ ।
बनेपामा भिजन सुक्युरिटिज प्रालि (३४), र ४० नम्बर ब्रोकर कार्यालय क्रियाटिभ सेक्युरिटिज प्रालिले बनेपा शाखा कार्यालयमार्फत डिम्याट गर्ने र शेयर कारोबारको काम गर्दै आएका छन् ।
क्रियाटिभ सेक्युरिटिज प्राली बनेपा शाखाका प्रमुख राजेन्द्र मर्हजन शेयर कारोबारमा गिरावट आएका कारण नयाँ लगानीकर्तामा उत्साह नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार बनेपा बाहेक, धुलिखेल, पनौती, भक्तपुरबाट पनि शेयर कारोबार गर्न लगानीकर्ता आएका छन् । बनेपामा यी दुई ब्रोकर कार्यालयसहित तीनवटा ब्रोकर कार्यालयले शेयर खरिद, बिक्रीको काम गर्दैआएका छन् ।
प्रकाशित : ३० भाद्र २०७४, शुक्रबार १७:४२